Right Person ကို ရှာဖို့ သင့်ကို တားဆီးနေတဲ့ dating အမှား (၄) ခု
နားရွက်လေးတွေကို နေ့တိုင်းနှိပ်ပေးရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
Long Distance Relationship ကိုဆက်လက်ရှင်သန်အောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ?
သင့်ပါတနာမှာ တစ်ခြားတစ်ယောက်ရှိနေပြီလို့ ပြောပြနေသော လက္ခဏာ (၁၀) ချက်
ကလေးတွေထဲက ဘယ်တစ်ယောက်က ပန်းအိုးကို ခွဲခဲ့တာလဲ? သင့်ရွေးချယ်မှုက ပြောပြမယ့် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
မိန်းကလေးဘက်က သစ္စာစဖောက်ဖို့ ကြံစည်နေပြီဆိုတာကို သက်သေပြနေတဲ့အချက်များ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ အိပ်ရာထဲမှာ စာဖတ်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်အကျိုးကျေးဇူးများ
အသက်ကြီးလာမှ နောင်တရလိမ့်မယ့်အရာ (၇)ခု
အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကို မေ့ပစ်ဖို့လိုတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
သင်ကိုယ်တိုင် သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ date တဲ့အခါ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတာတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်မှုဖို့ တစ်ခါတရံမှာ လက်တွေ့မကျတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကို အလွယ်တကူပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအမှားအယွင်းတွေကို အလွယ်တကူမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဆက်ဆံရေးမှာ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ခြင်းက စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပေမယ့်လည်း သင်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် အနာဂတ်အတွက် လျင်လျင်မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချလိုက်သင့်ပါဘူး။ ဒီအချက်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှလည်း အကြံဉာဏ်ကောင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သင့်ပါတနာကို သင်ဘယ်လောက်အထိသိပြီလဲ၊ သူကရော သင်နဲ့အမှန်တကယ်အတူရှိနေချင်သလားဆိုတာ ပထမဆုံးစူးစမ်းပါ။ ဒီလူဟာ သင်တို့ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားစေမယ့် သူတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်း သေချာအောင်အကဲခတ်ပါ။ လုံချည်တစ်ထည်ကို ကောင်းကောင်းရွေးသလို တစ်သက်လုံးအတွက် လူတစ်ယောက်ကို အချိန်ပေးရွေးချယ်ပါ။
သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်တွေကို ကန့်သတ်ပါ
”ပြီးပြည့်စုံသော” ကောင်လေး (သို့) ကောင်မလေးကို ရှာဖွေနေခြင်းဟာ အမှန်တကယ်ရူးသွပ်ရာရောက်ပါတယ်။ သင်ဟာ စိတ်ကူးယဥ်ဆန်ဆန်လူမှုမီဒီယာပေါ်က RS တွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှိုင်းယှဥ်ကောင်း နှိုင်းယှဥ်နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဆက်တည်းသင်စိတ်ကူးယဥ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်သတိမထားမိတာက လူမှုမီဒီယာတွေဟာ အသေးစိတ်အငြင်းပွားမှုတွေ၊ မနာလိုမှုတွေနှင့် အထီးကျန်ဆန်မှုတွေကို မပြပါဘူး။ RS တိုင်းမှာ အတက်အကျတွေရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သက်တမ်းကြာလာတဲ့ RS တွေက ဒီအဓိပ္ပာယ်ကို ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်က စိတ်တိုင်းမကျတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို အကဲခတ်စေပါ။ သင့်မှာ ”Perfect Partner” အတွေးအခေါ်တွေပဲ လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုရင် သင်တွေ့ရတဲ့ လူဟာ လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်ဘယ်တော့မှ သိရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အနာဂတ်ကို မမျှော်လင့်ပါနဲ့
ပြုံးတာဟာ သင့်ကို အမှန်တကယ်ပျော်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာ သင်ကြားဖူးပါသလား? အဲ့ဒီ့အရာကို သင့်ရဲ့ dating life မှာ အသုံးချပါ။ ”ငါက အမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းနေသွားရမှာပဲ” , ”ငါဟာ ဘယ်တော့မှ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး” ”အချစ်စစ်ဆိုတာ ငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး” စတဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ feedback တွေပေးနေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဘဝမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရှာတွေ့ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေနည်းပါးသွားပါလိမ့်မယ်။ ”ငါဟာ သာမန်လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်ပဲ၊ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကို ရရှိနိုင်တယ်” ”မပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုရင် ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး” လို့ပဲ တွေးပါ။
တစ်ဖက်လူပြောသမျှ ”Yes” လို့ထောက်ခံခြင်း
သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှကို သင်က ဟုတ်မှန်ကြောင်းထောက်ခံခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုးရိမ်မှုတွေကို မြင့်တက်လာစေပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ သင့်လိုအပ်ချက်တွေကို သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှုရဖို့အတွက် တသမတ်တည်းလျစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင် မပြည့်စုံတော့သလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ”No” လို့ ပြောဖို့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ သင်ဟာ အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပါတနာတစ်ဦးနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုရင် သူက နားလည်မှုထက် ပိုပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းမှာ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ငိုက်မြည်းခြင်းစတဲ့ မနှစ်မြို့ဖွယ် အချိန်လေးတွေရှိကြပါတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းအတွက်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ သင့်နားရွက်လေးတွေကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ပြဿနာတွေထဲကနေ သင့်စိတ်ကို လွတ်မြောက်စေနိုင်သော အာရုံကြောခံစားမှုကို တကယ် relax...
လူတိုင်း၊ လူတိုင်းကတော့ ဘီလ်ဂိတ်၊ အိုင်းစတိုင်းနဲ့နယူတန်တို့လို အောင်မြင်ချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေ၊ ရင်းနှီးခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိပြီး အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်မယ့် အကျင့်ဆိုးတွေကို မရမက ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုသာ လုံးဝစွန့်ပစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပြီး အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်...
သင်ဟာ စာနာတတ်သူတစ်ယောက်လား? Empath စာမေးပွဲလေးနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။၁။ သင်ဟာ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ နာကျင်မှုနှင့် ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ခံစားနိုင်တယ်။၂။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါ ချက်ချင်းကောက်ပေးတယ်။ မဟုတ်ရင် တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို လှမ်းပြောတယ်။၃။ သင်ဟာ သင့်အနီးနားက တစ်ချို့လူတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားနည်းသွားစေတယ်။...
၁။ ပဲရစ်မြို့ (ပြင်သစ်နိုင်ငံ)ပဲရစ်မြို့ဟာ အီဖဲလ်မျှော်စင်နဲ့အတူ လူသိများထင်ရှားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး စိန်းမြစ်ကြီးထဲမှာ ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးတွေပါ်ကနေတစ်ဆင့် နေဝင်ဆည်းဆာကိုခံစားဖို့ဆိုတာက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ ကမ္ဘာကျော်ရေမွှေးတို့ရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ ပဲရစ်မြို့ဟာ ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားအသောက်အရာတွေမှာအပြင် ဗိသုကာလက်ရာတွေမှာလည်း ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့မြို့တော်အဖြစ်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြားပါတယ်။ ၂။...